आज अन्तिम प्रचार, कुन नेताले कहाँ सम्बोधन गर्दैछन् ? - Lumbini Times
आज अन्तिम प्रचार, कुन नेताले कहाँ सम्बोधन गर्दैछन् ?
321 views | लुम्बिनी टाइम्स संवाददाता | सोमबार, १८ मंसिर ।
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि आजै रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ ।
त्यसैले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु आज अन्तिम प्रचार प्रसारमा व्यस्त हुँदैछन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज डडेलधुरामा अन्तिम चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
अमरगढीमा हुने सभालाई सम्बोधन गरेर उनी गृहजिल्लामै बस्नेछन् । बिहीबार मतदान सकेर मात्रै उनी काठमाडौं फर्किने तयारी छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा चुनावी सम्बोधन गर्नेछन् ।
कांग्रेसका गगन थापासँग प्रतिष्पर्धामा रहेका एमालेका नेता राजन भट्टराईको क्षेत्रमा उनले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनमा नै सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।
प्रचण्डले उमेदवारी दर्तापछि धेरै समयमा आफ्नै क्षेत्रमा बिताएका छन् । यसैबीच आजै रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ । मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नहुने तथा मौन अवधि शुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका आ–आफ्ना निर्वाचन चिह्न तथा प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहितमा उल्लेख छ ।
मौन अवधिमा एसएमएस, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यममार्फत समेत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न पाइँदैन ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधि प्रसाद यादवले राजनीतिक दल र उमेदवारबीच पहिलेको तुृलनामा आचारसंहिता पालनामा संम्यम् र मित्रवत व्यवहार आयोगले पाएको बताए । यसले निर्वाचन सुरक्षामा सहयोग पुगेको जनाए ।
दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा १५ हजार ३४४ मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । दोस्रो चरणका लागि मंसिर १९ र २० गते सम्बन्धित मतदान केन्द्रबाट मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी गराए ।